Apple dia manavao ny tranokalany Accessibility miaraka amin'ny iOS sy iPadOS functions | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | | iOS, About us
Ny isan'ny olona mampiasa an'io paoma fitaovana tena lehibe io. Ny mpampiasa tsirairay dia samy manana ny mampiavaka azy ary ny rafitra dia tsy maintsy ampifanarahana amin'izy rehetra. Avy amin'ny mpampiasa manana fahasembanana amin'ny fandrenesana ka hatramin'ny jamba amin'ny alàlan'ireo mpampiasa manana fahasembanana amin'ny fahitana. ny fampiasam-bola amin'ny fanavaozana misy mahatonga an'i Apple ho iray amin'ireo orinasa manao adaptation indrindra amin'ny fidirana amin'ny rafitra fiasa: iOS sy iPadOS. Raha ny marina dia nanavao ny tranokalan'izy ireo izy ireo Accessibility manasongadina ireo fiasa tena manan-danja indrindra amin'ny iOS sy iPadOS hanatsarana ny fampiasana ireo rafitra ireo ho an'ireo mpampiasa manana karazana fahasembanana rehetra.
Ampifanaraho mba hahitana: fidirana eo afovoan'ny iOS sy iPadOS
Makà sary iray ao amin'ny fianakaviana, mahazohy ny FaceTime, na ahodino ny lambanao rehefa maraina. Tianay ny tsirairay hankafy ny fotoana andavanandro omen'ny teknolojia. Izany no antony hiezahantsika hahatonga ny vokatra Apple ho afaka hatramin'ny minitra zero. Satria ny tena sandan'ny fitaovana dia tsy refesina amin'ny heriny, fa amin'ny fahafaha-manolotra azy ho an'ny tsirairay.
Tamin'ny 3 Desambra, ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana. Andro iray taty aoriana dia nanavao ny kinova amerikana an'ny tranokala Accessibility aseho i Apple ny hatsaran'ny fampidirana iPadOS sy iOS. Isaky ny fanavaozana dia andramana ny manampy fiasa vaovao hanatsarana ny fiainan'ireo sembana amin'ny fitaovan'ny Apple.
Apple dia manasa mpamorona sasany hanatrika fivoriana amin'ny Internet momba ny fahazoana miditra
Ao aminy tranonkala vaovao mandeha ny heviny amin'ny fanasongadinana ny saina ny vaovao lehibe momba ny fidirana. Raha ny fahitana azy dia azo atao ny mampitombo ny haben'ny litera, mampiditra zoom ho azy, asio Magnifying Glass na aiza na aiza eo amin'ny efijery, sns. Raha miroso amin'ny fihainoana isika, dia afaka manamboatra ny masontsivana amin'ny écouteur, manatsara ny fahita matetika na manivana azy ao amin'ny AirPods Pro na mampandeha ny fihenan'ny Live Live hanamafisana ny feon'ny ivelany ao amin'ny fonenantsika.
Misy fitaovana sy fiasa tsy tambo isaina izay tsy fantatry ny maro amintsika amin'ny safidy Accessibility an'ny rafitra fiasa samy hafa, fa tsy Apple fotsiny. Na izany aza, ny tolona hiezahana hampitombo ireo safidy ireo dia ny fofonain'ny rivotra madio izay ilain'ny mpampiasa manana fahasembanana betsaka hanaovana ny fampiasana ireo terminal ireo araka izay tratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny tranonkala Apple Accessibility vaovao dia mampiseho ny tombony azo amin'ny iOS sy iPadOS
Apple dia mamorona programa fanoloana touchpad ho an'ny iPhone 11